Propars Blog: Ihe niile gbasara azụmahịa e-commerce! | Propars E-bupụ
Propars Blog: Ihe niile gbasara azụmahịa e-commerce!
Kedu ihe bụ Amazon Enhanced Producer Responsibility (EPR)?
Amazon, nnukwu ikpo okwu e-azụmahịa n'ụwa, kwuputara na mbụ na site na 2022, ndị na-ere ya ga-emeziwanye ibu ọrụ ha gbasara Ọrụ Mmepụta Mmepụta (EPR). Karịsịa gburugburu Germany na France ...
Akụkọ E-azụmahịa nke Europe 2021
Dịka ndị otu Propars, anyị achịkọtala gị ihe mere n'ahịa e-azụmahịa Europe na 2021, nke anyị hapụrụ n'oge na-adịbeghị anya.
Otu esi ere mba ofesi?
Site na ụwa dijitalụ na-eji ịntanetị eme ihe, ọ ga-ekwe omume ugbu a maka azụmahịa ọ bụla ire mba ọzọ. Ịbịakwute ndị ahịa, nyochaa ngwaahịa ya na usoro TL na ahịa mgbanwe mgbanwe mba ọzọ, na imeghe ahịa ọhụrụ ...
4 Jenụwarị 2022
Kedu ihe bụ Omnichannel na Multichannel Marketing? Kedu nke kacha mma maka ụlọ ọrụ gị?
Ọ bụ ezie na a na-asụgharị ahịa Omnichannel na Multichannel n'asụsụ Turkish dị ka ahịa ọtụtụ ọwa, ha bụ okwu dị iche iche. Ịghọta ọdịiche dị n'etiti echiche abụọ a na ime ka ha kwekọọ n'ebe ọrụ gị n'ụzọ kachasị mma bụ maka ụlọ ọrụ gị ...
Nweta ihe ịga nke ọma na ọrịre ọla ọcha, ọla edo na diamond gị na azụmaahịa e-commerce!
Mgbe ị gụchara akụkọ a anyị kwadebeere gị, ị ga-enwe ozi niile dị mkpa iji mepụta ụlọ ahịa ihe ịchọ mma n'ịntanetị, jikwaa ma zụọ ahịa ọla ọcha, ọla edo na diamond gị. Gịnị kpatara na ngalaba ọla...
Iwu European Union ọhụrụ VAT (VAT) / Gịnị bụ iOS na OSS?
Na njedebe nke 2020, European Commission kpebiri ibigharịa iwu VAT (VAT) ọhụrụ, nke a tụrụ anya na ọ ga-amalite na Jenụwarị 1, ruo Julaị 19, 1 n'ihi ọrịa na-efe efe nke Covid-2021. Mba ndị nwere Corona...
Otu esi ere na nyiwe chọrọ?
Isiokwu ndị anyị na-ekpuchi na blọọgụ anyị, ebe anyị na-agwa gị ihe ịchọrọ ịma ka ị na-ere n'elu ikpo okwu Wish, otu n'ime ahịa e-azụmahịa na-agafe agafe n'ụwa kachasị na USA gaa Europe; Gịnị bụ ọchịchọ? chọrọ...
Amazon Prime Day: Ndụmọdụ ndị na-ere ere
Enwere naanị ụbọchị ole na ole maka mmemme Amazon Prime Day, nke a na-eme kwa afọ n'ụwa niile ma na-aga n'ihu ruo ụbọchị abụọ. Na mkpọsa a ga-eme na 21-22 June afọ a, Prime...
Kedu ka esi ebupụ na Mexico?
Isiokwu ndị anyị tụlere na blọgụ blọgụ anyị, nke anyị kwadebere ijere ozi dị ka ụzọ ụzọ maka ndị chọrọ mbupụ na Mexico, nke na-ejide ihe ịga nke ọma America na Canada na e-azụmahịa; Ọnụ ahịa e-commerce Mexico bụ nke kachasị na Mexico…
Ebay kwekọrịtara na Payoneer dị ka ụzọ ịkwụ ụgwọ!
Ozi ọma maka ndị na-ere ahịa! Nsogbu PayPal apụọla na Ebay, otu n'ime usoro ikpo okwu na-eduga n'ụwa. N'ihi ịgbakwunye Payoneer na nhọrọ ịkwụ ụgwọ ya, eBay agbakwunyela Payoneer na akaụntụ onye na-ere gị.
Ihe niile ịchọrọ gbasara E-Commerce!
E-Akwụkwọ ọnụahịa 14
E-azụmahịa Trends 1
Ndị ọchụnta ego 9
Nyocha ngalaba 1
ndị na -akwado ya 5
Nyocha obodo 3
Copyright © Propars Blog: Ihe niile gbasara azụmahịa e-commerce!. 2022 • Ikike niile echekwabara.
Okwu Koala WordPress by Okwu Ecko. Ebiputara ya na WordPress.